Yintoni entsha kwi-Global Mapper 13 - Geofumadas
Yintoni entsha kwi-Global Mapper 13
NgoSeptemba, 2011 Geospatial - GIS, ezintsha
Inguqulelo entsha ye-Global Mapper iye yaziswa, kwi-13 yayo inguqu ye-32 kunye ne-64 bits. Nangona le yinkqubo ephakanyiswayo yi-GIS yamandla, ukulula kwayo kuyenziwe kakhulu, ngakumbi ngokusingatha imodeli emithathu-ntathu kunye nokukwazi ukungenisa nokuthumela ngaphandle kweefomathi ezahlukeneyo.
Kukho utshintsho oluninzi, ndiya kuzama ukufingqa abo babambe ingqalelo yam kwaye ndicinga ukuba kubalulekile, kodwa kubasebenzisi abasebenzisa rhoqo le nkqubo kukho okungakumbi.
Utshintsho kakhulu okuphawuleka iisethi zedatha inkxaso a Geodatabase ESRI. Le nkqubo isondela i niche umdla apho abasebenzisi ArcMap obuqwebele eninzi data kodwa kufunwa ekubeni ukuthenga ulwandiso ezifana 3D Analyisis, nto leyo ngokungalindelekanga ukwenza into elula encinane kufuneka anike isiqingatha sokufudumala enkundleni. Ukusebenzisa i-GlobalMapper 13, abasebenzisi bangavelisa ngemizuzwana zedijithali kwaye ubuyisele kwi-geodatabase ngaphandle kokulahlekelwa lonke uhlalutyo lweenkcukacha kunye nokwakhiwa kwamandla kwi-ESRI enokwenza ngaphezulu.
Ukuthunyelwa kwamanye amazwe kuye kwandisa amandla okuthumela ifom ye-ASTER DEM ifomati ye-SRTM HGT, eyiyo ifomathi eqhelekileyo, abaseMelika bayisebenzise kakhulu ubunako bayo phambi kokufakwa kweengxelo ze-quadrants. Ukongezelela unokwazi ukuthumela ngaphandle .00I ifomethi yeVulcan 3D TIN.
Ukongeza kule fomati abaninzi sele inkxaso Global Mapper, ngoku sele ifakiwe inkxaso SEGY format, umgangatho esetyenziswa kwindawo yesimo sehlabathi, nangenxa format lulo, nto leyo DEM umzekeliso osetyenziswa yi-Japanese kunye NMGF ezininzi ezisetyenziswayo kakhulu Aeronautics.
Kwimeko yokuthunyelwa kwemifanekiso ngaphakathi kwefayili ye-kmz, ngoku kunokwenzeka ukucacisa umgangatho we-jpg, oya kunciphisa ubungakanani bokutya. Kwakhona ngoku ixhasa xa i-kmz izisa iifayile .gif
Ungathumela imifanekiso kwi-ERDAS .img format, ephakanyiswa ngabasebenzisi be-ESRI.
Kuba iifayile DGN, oku kuye kwaphucula into yokuba ezinye iimilo ezimacala singena mntu emva weza ayikwazanga ukutolika geometries multiple ukuba Microstation elide iphathwe ngaphakathi iiseli ekwabelwana. Kwakhona wayilungisa imposiso kwenzeka ezinye amagophe ukuba bulumko Abazange baninzi.
Xa ukukhuphela izendlalelo zenziwe nge-WCS, ngoku ungenazo iingxaki ukuba zikwahlukileyo okuhlukile kuneGoogle Earth (lat / long / WGS84)
Kwimeko yeefayile ze-Open Street Maps ze-XML, ziye zaphucula ingxaki eyayilindile xa kukho idatha eninzi. Kuye kwenzeka kunye namafu e-Lidar LAS amanqaku (ahlala ehlala amaninzi), apho ayenze khona ukusetyenziswa kwememori.
Ukuthunyelwa kweefayile ze-DWG kunye ne-DXF, ingxaki eye yalungiswa nayo iilebhile kunye nabalinganiswa be-31 (hamba, ezo azinako iilebhile).
Ngoku isekela i-geoPDF ngaphandle kwemida echazwe ngaphambili.
Umbutho weetafile. Iyakwazi ukwenza Ujoyine phakathi kweetafile zemihlathi eyahlukileyo ngeendlela eziqhelekileyo, eziphambili kodwa ezingabonakaliyo.
Khuphela kunye nokubala kwedatha kwiibhile. Ngoku siye sakha amandla okwenza imisebenzi yemathematika phakathi kwedatha yekholomu enye, ukuba igcinwe kwelinye njengoko kuya kuba ngumzekelo, ukubalwa kommandla kwiyunithi yokulinganisa eyahlukeneyo ngento ethile; Umsebenzi ofanayo usebenza njengekopi kwaye unamathele phakathi kweetable, kuba yinto yokuphindaphinda nganye iyunithi, eya kuba nexabiso elifanayo.
Kulawulo lweemodeli zedijithali, izakhiwo ezintsha zingenziwa kwiindawo ezikhoyo, iingongoma ezithile kunye nakubonakaliso betafile ehambelana nomphezulu. Ngaloo ndlela, imodeli engaphezu kweyodwa ingagcinwa kwitheyibhile enye yeempawu, ngaphandle koku kuthetha ukuba zibini kunye nokuququzelela imisebenzi efana nokusika / ukugcwalisa ngaphandle kokwenza imisebenzi ngaphandle kwetafile enye.
Ngoku uphando lweedatha, unokhetho olumele lwenziwe kwimbono yangoku kwaye kungekhona kulo lonke uluhlu.
Unokuvumelanisa ukuthunyelwa ukuze indawo efanayo ibonakale kwiGoogle Earth, nangona ungeke ukwazi ukuyenza, efana neyodwa yezinto ze-6 ezingenziyo Microstation kule ngxelo.
Ekusingatheni umaleko, ke ngoku ukwenzeka intsebenziswano enkulu ukususa umaleko yeraster ashiye ngasemva umaleko transparent okanye kumda wesangqa, apho de iinguqulelo 12 wahlala kwiingcamba endala yolawulo eziphelelwe lixesha.
Kwimeko yeenkcukacha ezenziwa kwi-intanethi yi-Intermap, ngoku unokufumana isisombululo esiphezulu, ekubeni awuyikukhuphela idatha njengendawo kodwa stream Ihlaziya njengoko i-zooms. Kwimeko yokulayisha idatha ye-NOAA, unokukhuphela iifayile zokushiya zegridi zeGoid.
Ezinye izinto eziphuculweyo ziya kubonakala endleleni, ngokukodwa ngamandla anikwe kwiqhosha le mouse kunye nokusetyenziswa kwebhodibhodi kokubili ukwakhiwa nokuhlela kwedatha.
Kwimeko yeenkcukacha ze-GPS kunye ne-NMEA protocol, ukhetho lweedola ze-DPGGA zongezwe.
Ukuphucula ukwakhiwa kwedatha
Kukho ukuphucuka okubalulekileyo kule nxalenye, nangona ihlala ibuthathaka obukhulu. Kule meko, ulawulo lwe uhlutha, i kufuphi nawe Ngoku uhlala kwisalathisi sokuhlela njengento ephambili ngaphambi kokuba kukho ezinye iindawo okanye ukhe ungakhethi i-geometries.
Kwakhona ngoku unokwenza lula ngokulula imigca kunye nemiphetho yeepoloni ngokusekelwe kwiziphene ngokusebenzisa indlela ye-3.
Ukongezelela imida zokwakha imenu, xa kufuneka kukhethwe indawo, kusenokubonisa nokudalwa imigca ukusuka kwindawo ekufutshane, leyo lula ukuhlolisiswa iingongoma polygonal wathimba ukusuka GPS.
Unokwenza utshintsho ngento engaphezulu, njengokuba kunjalo ukuhambisa uluhlu. Ngokuqhelekileyo kuyinto embi kodwa isebenzise xa ukuchaneka kwe-geodesic kungabalulekanga phambi kokusetyenziswa kwedatha, ukunika umzekelo:
Amaxesha amaninzi sinomgca kwi-NAD27 okanye i-PSAD 56 kwaye siyifudukela kwi-WGS84 into esiyenzayo iyishukumisela i-vector eyaziwayo. Akuyi kuba yindlela ekhuthazwayo, kodwa ukunamathela kwedatha ekhoyo okanye xa ingathinteli umongo wendawo ... kuyafaneleka.
Ngoku kukho iDatum ebizwa ngokuba yi "NAD83", ngaphandle kwe- "D_North_American_1983", emva kwe-ESRI kwiinguqulelo zamandulo ze-ArcView zididekile ezinye ze-sebum ngebhotolo kwaye zenziwa .prj iifayile eziveliswe ngohlobo lwe-archaic ezingahambelani nale projekthi. Kwenzeka into efanayo kwi-Microstation, xa ufuna ukukholelwa ukuba i-NAD27 esetyenziswa yi gringo AmaMerika kwiindawo ezininzi zeli zwekazi enza uphawu lokuqalisa.
Into efanayo eyenzile ngeDatum yesikhashana ebizwa ngokuba yi-South American Datum 1956 (PSAD56), ukwenza ukuhambelana neephene kunye nedatha eyenziwe kwi-Mapinfo.
Ngoku, xa kuthengiswa idatha ye-generic kwifayile ye-ASCII, kukho inkxaso yohlobo lwee-degrees, imizuzu kunye nemizuzwana ngeqondo elide, kunye neesigidi kunye nemizuzu eneempendulo (ngaphandle kwemizuzwana). Okuyinkimbinkimbi njengoko kubonakala ngathi, ixhasa amaqhezu, njengokuba uthi 0.25 usebenzisa i-1 / 4
Post edlulileyo«Edlulileyo thumbnails Post Related kudala thumbnails kunye plugins
Post Next I-Course kwiimarike zomhlaba ezingaqhelekanga kunye nokulawulwa komthethoOkulandelayo "
Iimpendulo ze-11 "Yintoni ezisa i-Global Mapper 13"
nestor sanchez uthi:
njengento esebenzayo kwimephu yebala
I-GLOBAL MAPPER yeyona ndlela ihamba phambili neyona ndlela ihamba phambili ithi xa kungekho ziphuculi ezingcono kuzo zonke iintlobo zomsebenzi uncedo lokwenene.
Ndiyabonga ... SAN GlOBAL MAPPER.
ingelosi ruiz uthi:
Ngaba i-Global Mapper isandiso apho unokuguqula iifayile zakho ukuze ufunde i-autocad okanye i-microstation?
ukunambitha i-blano uthi:
Ndifuna ikhowudi yokusebenza nceda
NDIFUNA UKUFUNDA UKUSEBENZA IT
Siyabulela ukujonga, sesele senze uhlengahlengiso.
Ndiyifumene kakhulu into eyenziwa yile nkqubo, ndiyisebenzise amaxesha ambalwa ukujonga i-ortofotos yedijithali ye-INEGI kwaye uyithumela kwi-ArcGis. Ndicinga ukuba iifayile ezithumela ngaphandle ziyi-DWG yokwandiswa kwaye ayiyi-DGW, eyi-AutoCad, andiyazi ukuba ukuthetha kwam kulungile. Ukubulisa
ssjsdfoisdfsdi, ndiyakwazi ugaxekile.
Ndiyabonga! Ndamfuna ukuba afunde iDataset, ndicinga ukuba nguye kuphela.